KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Cudurka Duumada oo ka dilaacay deegaano hoostaga degmada Mahaday
Saturday 8 December 2012 13:41
Cudurka Duumada oo ka dilaacay deegaano hoostaga degmada Mahaday
Muqdisho (KON) - Deegaano hoostaga degmada Mahaday ee gobalka Shabeelaha dhexe ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dilaacay cudurka Duumada, kaasi oo faro ba’an haatan ku haaya dadka ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi.
Deegaano hoostaga degmada Mahaday ee gobalka Shabeelaha dhexe ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dilaacay cudurka Duumada, kaasi oo faro ba’an haatan ku haaya dadka ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi.
Deegaanada cudurkaan Duumada uu ka dilaacay ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Hilwaa oo hoostaga degmadaasi Mahaday, sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka.
Xuseen Junuub oo ka mid ah dadka deegaan ee degmada Mahaday ayaa wuxuu sheegay in haatan dhibaato badan ay ka taagan tahay deegaano dhor ah oo ka tirsan degmadaasi Mahaday.
Wuxuu sheegay ninkaan ka mid ah dadka deegaanka in ay jiraan dad badan oo la ildaran cudurka Duumada kuwaasi oo aanan heesan wax daayooyin ah ama meelo lagu dabiibo.
Deegaanada Miyiga ah eek u dhow degmada Mahaday ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo xaga dholasha ah, mana jiraan wax Hay’ado ah oo ka howlgala halkaasi.